Ireo mpitsangatsangana an'habakabaka Kanadiana dia mahazo tombony amin'ny Fitsipika fiarovana ny mpandeha an'habakabaka vaovao
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ireo mpitsangatsangana an'habakabaka Kanadiana dia mahazo tombony amin'ny Fitsipika fiarovana ny mpandeha an'habakabaka vaovao
Enga anie 24, 2019
Ilaina ny fivezivezena an'habakabaka amin'ny fitomboana ara-toekarena any Canada. Ireo Kanadiana, mpizahatany ary orinasa dia samy mahazo tombony amin'ny indostrian'ny rivotra azo antoka sy mahomby ary mangarahara kokoa. Ny fividianana tapakila ho an'ny dia an-habakabaka dia mety ho fandaniana be ho an'ny fianakaviana kanadiana. Rehefa mividy tapakila fiaramanidina ny kanadiana dia manantena izy ireo fa hanefa ny adidiny ny kaompaniam-pitaterana ary mendrika ny hitsaboana azy ara-drariny.
Ny Honorable Marc Garneau, minisitry ny fitaterana, dia nanambara androany fa ny Kanadiana dia hanomboka handray tombony amin'ny lalàna vaovao momba ny fiarovana ny mpandeha an'habakabaka manomboka amin'ny 15 jolay 2019. Ny fitsipi-pifehezana farany an'ny maso misahana ny fitaterana kanadiana dia hita ao amin'ny tranonkalany ankehitriny.
Ny lalàna momba ny fanavaozana ny fitaterana, izay nahazo Royal Assent tamin'ny Mey 2018, dia nanome baiko ny masoivoho hamorona fitsipika ho an'ireo mpandeha an-habakabaka izay ho madio, tsy miovaova, mangarahara ary ara-drariny. Rehefa afaka volana maro taorian'ny fifampidinihana ho an'ny daholobe sy ny mpiara-miombon'antoka, ny Kanadiana dia tsy ho ela dia hosaronan'ny lalàna vaovao henjana izay mihatra amin'ireo mpitatitra fiaramanidina rehetra manidina mankany, avy sy ao Canada. Ireto fitsipika vaovao ireto dia hitaky ireo mpitatitra rivotra hanolotra fari-pitsaboana fitsaboana. Ho fanampin'izany, amin'ny tranga sasany, ny mpitatitra dia takiana hamoaka onitra amin'ireo mpandeha ao anatin'ny fe-potoana hentitra. Tsy mila mitaraina amin'ny masoivohon'ny fitaterana kanadiana aloha ny mpandeha; fa kosa, ny fitadiavana vola dia alefa mivantana voalohany amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ny mpitatitra fiaramanidina dia takiana hanaraka ireo fitsipika ireo ary mety hiatrika sazy hatramin'ny $ 25,000 isaky ny tranga tsy fanarahan-dalàna.
Taorian'ny fidirana voaray momba ny volavolan-dalàna, ny fomba fiasa mifototra amin'ny dingana dia hiantohana ny fotoana hitondran'ireo mpitatitra rivotra hanitsy ireo fitsipika vaovao. Ny fepetra takiana amin'ny fifandraisana, tara fahatarana, tsy nety niditra, entana very ary simba ary ny fitaterana zava-maneno dia hanan-kery amin'ny 15 Jolay 2019. Ny fepetra takiana sarotra kokoa mifandraika amin'ny fahatarana sidina sy fanafoanana dia hanomboka amin'ny 15 Desambra, 2019. Ireo lalàna vaovao koa dia mihevitra ny zava-misy iainan'ireo mpitatitra rivotra kely sy avaratra, ary koa ireo mpitatitra vidiny ambany indrindra, miaraka amin'ny fepetra takiana arahana mifanaraka amin'izany.
"Ny tanjonay dia ny hanomezana fomba fiasa manerantany momba ny zon'ny mpandeha an'habakabaka izay azo vinavinaina sy ara-drariny ho an'ny mpandeha, sady manome toky ireo mpitondrana fiaramanidina hijanona ho matanjaka sy mifaninana. Rehefa vita ny fizahana ela sy ela, dia faly aho nilaza fa mahatratra izany fandanjalanjana izany ny lalàna vaovao ary hanome ny zon'ny mpivahiny ny zony sy ny fitsaboana izay aloany ary mendrika azy ireo. "
Ilay manan-kaja Marc Garneau
Minisitry ny fitaterana